Ndeipi Graphics Kadhi Ini Yandinoda? - Nyore Multi Ratidza Software
Ndeipi IKhadi Yemifananidzo Ndinoda?
Yakagadzirwa Pa 16 / 11 / 2019
Iwe unogona kushandisa chero giraidhi yemifananidzo yaunoda, asi iyo inofanirwa kuve inokwanisa kutsigira huwandu hwezviratidzo zvaunoda kubatanidza. Ratidza Rakawanda Zvakawanda rutsigiro kusvika ku6 akasiyana Display.
* Ona pazasi kuti uwane rumwe ruzivo nezve Enterprise mhinduro kune anopfuura matanhatu kuratidzwa.
Kubva pa1 kusvika ku3 Screens
Kupfuura 3 Screen
MIFANANIDZO KADHI ADVICE
HDMI4096 x 2160 pa60 Hz
Display Port7680 x 4320 pa60 Hz
DVI1920 x 1200 pa60 Hz
Mini Ratidza Port2560 × 1600 pa60 Hz
Ive nekuchengera kusarudza kadhi rako zvichibva pane zvinobuda pazvikwiriso zvako, avo vane DisplayPort kana MiniDisplayPort havana kujairika uye kushandiswa kweshanduri (DisplayPort? HDMI) kunodhura.
Pasina VentilationPassive System
Kuderedzwa Simba rekushandisa
Imwe chete mhando yekubuda kwesikrini (MiniDisplayPort)
Heano maviri akakurumbira emifananidzo makadhi isu atinokurudzira. Aya ndiwo makadhi ehunyanzvi, akatengo kwakatenderedza € 300:
Tsigiro yeanosvika mana ekuratidzira (MiniDisplayPort)
Click pano kuenda kuNVIDIA Webhusaiti kuti uwane rumwe ruzivo.
Click pano kuenda kune AMD Webhusaiti kuti uwane rumwe ruzivo.
Multiple screen kuburitsa (HDMI-DVI-DisplayPort)
Yakanyanya kushandiswa kwesimba
Ruzha (+ -30db)
Isu tinokurudzira iyi graphic kadhi, yakachipa, inoshanduka-shanduka uye inokodzera chaizvo dijitina signage, mutengo kwakatenderedza € 200:
Tsigiro inosvika kumatanhatu kuratidzira
3 x HDMI (3 skrini ne HDMI)
1 x DisplayPort (1 skrini ine DisplayPort
1 x DVI-D (Dual Link 2 Screens neDVI)
Kuedzwa uye kubvumidzwa kushandiswa kwakanyanya 24/7, kukosha kwakanyanya kwemari.
Click pano kuenda kuGigabyte Webhusaiti kuti uwane rumwe ruzivo.
Mazwi ekutenga ichi chigadzirwa: Gigabyte GeForce® GTX 1050 Windforce OC 4GB Ti
Kupfuura 6 skrini
Unogona kushandisa makadhi maviri emifananidzo muSLI ine mamaibhodhi ane 2 PCI-e slots kubata anosvika gumi nemaviri skrini.
Mamwe makadhi ekupedzisira emifananidzo makadhi anopa manejimendi gumi nemaviri skrini, isu tinopawo mhinduro dzemapurogiramu enzvimbo dzekuraira uye madziro echidzitiro
Tinoda kukubatsira iwe neprojekiti yako, taura nemumwe weboka redu rekutsigira kuti uve nechokwadi chekuti iwe unosarudza michina yakakodzera uye nekukurukura edu akasiyana software mhinduro.
Kana iwe uchifarira yedu Nyore Multi Ratidza software, tinya pano kurodha yedu yekuyedza vhezheni.
Maitiro ekutenga enhau edhijitari uye kudzikisira kubiridzira kwekushambadzira
Zviratidzo zveDhijitari senzira yakanaka yekukwezva vatengi nyowani! Mashandisiro uye kupi?
Zviratidzo zveDhijitari: Mutsva mutsva mukutaurirana